Nolavin’ny Fitsarana Shinoa Ny Fitoriana Mikasika Ny Loton-drano Ao Lanzhou · Global Voices teny Malagasy
Nolavin'ny Fitsarana Shinoa Ny Fitoriana Mikasika Ny Loton-drano Ao Lanzhou
Voadika ny 25 Avrily 2014 16:02 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, čeština , 日本語, Español, বাংলা, English
Nolavin'ny fitsarana Shinoa ny fitoriana ilay orinasa mpamatsy rano ao Lanzhou izay napetrak'ireo mponina miisa dimy noho ny fisiana benzène miteraka homamiadana tafahoatra amin'ny rano amin'ny paompy.
Nilaza ny Fitsarana Mpanelanelana ny Vahoaka ao Lanzhou fa tsy nahafeno ireo fepetra ara-dalàna ilaina amin'ny fametrahana fitoriana amin'ny anaran'ny vahoaka mikasika ny loto araka ny voalazan'ny fehezan-dalàna sivily andininy faha-55 ireo olona dimy ireo. Milaza ny andinin-dalàna fa “ireo sampan-draharaha sy fikambanana voalazan'ny lalàna ihany” no manana alalana hametraka fitoriana mikasika ny loto. Amin'ity raharaha ity, ny Federasiona Shinoa misahana ny Tontolo Iainana eo ambanin'ny biraon'ny tontolo iainana ihany no afaka mametraka fitoriana.
Sarintany misy ireo loza mifandraika amin'ny loton'ny rano amin'ny paompy ao Shina nandritra izay taona lasa izay. Sary avy amin'ny Sina Weibo.
Tamin'ny 11 Aprily, nangataka tamin'ireo mponina ny governemantan'ny tanàna mba tsy hisotro rano amin'ny paompy ao anatin'ny 24 ora taorian'ny fizahana natao izay nahitana fa nahatratra in-20 avo heny amin'ny fetram-piarovana nasionaly ny tahan'ny benzene amin'ny famatsian-drano. Mponina maherin'ny 2 tapitrisa no voakasik'izany loton-drano izany.
Miankina betsaka amin'ny Renirano Mavo i Lanzhou amin'ny famatsian-drano, tanàna indostrialy manana mponina 3,6 tapitrisa ao avaratra-andrefan'i Shina. Tao anatin'izay taona vitsy izay, niaina fampiasam-bola mihoa-pampana ny tanàna satria namelabelatra fisantaran'andraikitra isan-karazany hampandrosoana ny toekarena ao amin'ireo faritra andrefana tratra aoriana ara-pandrosoana ny fanjakana.
Nilaza tamin'ny Reuters i Wang Canfa, mpampianatra lalàna momba ny tontolo iainana fa mahalana ireo fitsarana mandray fitoriana apetraky ny olona iharan'ny loto momba ny tontolo iainana.
Maro ireo mpisolovava mihevitra fa tsy ara-dalàna ny fitsipahan'ny fitsarana manokana ilay fitoriana. Nanoratra tao amin'ny habaka bilaogy madinika malaza Sina Weibo ilay mpampianatra lalàna Shinoa Xu Xin:
Raha mbola misotro rano voaloto izy ireo, dia lasibatra mivantana amin'ity raharaha ity, tokony eken'ny fitsarana ny fitorian'izy ireo. Manitsakitsaka lalàna ny fitsarana amin'ny tsy fanekena ny hetsika sivily ataon'ny olom-pirenena. Mino aho fa marobe ireo olona nametraka fitoriana. Ao anatin'izany, mino aho fa hametraka fitoriana ho tombotsoam-bahoaka ny Federasiona Shinoa misahana ny Tontolo Iainana.
Mpiserasera “John-Paul” naneho hevitra hoe:
Fomban'ny fitsarana hialàna amin'ity raharaha ity ny fandavana ilay fitoriana. Tsy azo leferina izany. Mitady hanao tsirambina ireo karazana disadisa ny fitsarana. Ity fanitsakitsahana miharihary ny «lalàna mifehy ny sivily» ity dia fomba iray fanaon'ny fitsarana matetika amin'ny raharaha tahaka itony.
Wangyi news nanipika ireo fitaka amin'ny lalàna ao Shina :
Ny ankamaroan'ny loza mitatao amin'ny tontolo iainana ankehitriny dia noho ny tsirambina ataon'ny governemanta manoloana ireo orinasa mpamoaka loto sy ny fibosesehan'ny loto mivoaka amin'ny faritra nanatobiana azy. Ny ohatra iray mivaingana dia ny Federasiona Shinoa misahana ny Tontolo iainana, izay hany tokana voalazan'ny lalàna ho miandraikitra ny tombotsoam-bahoaka eo amin'ny tontolo iainana. Tsy mitsahatry ny misy mpandoto tontolo iainana koa ao amin'ireo mpikamban'ny Federasiona. Raha voasaringotra amina raharaha fandotoana tontolo iainana ireo orinasa mpikambana ao, hisy fiantrakany mivantana amin'ny fahamarinan-toeran'ny fitsarana izany eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana mahakasika ny tombotsoam-bahoaka ka miteraka ahiahy amin'ny hoe rehefa ahoana vao azo itoriana na hanenjehina amin'ireo raharaha ireo.